Jiilaalkii ugu kululaa mudo 250 sano ah | Somaliska
Jiilaalkii ugu kululaa mudo 250 sano ah
Jiilaalkii ugu kululaa mudo ka badan 250 sano ayaa soo maray Sweden maalmihii ugu dambeeyay iyadoo meelaha qaar uu heerkulku gaaray 11C. Arintaan ayaa loo aaneeyay isbadelka ku yimid cimilada aduunka oo saameyn ku yeelatahay Sweden.
Magaalooyinka Gävle iyo Karlstad ayaa heerkulku gaaray 10-11C iyadoo lagu jiro bartamihii jiilaalka oo xiligaan uu jawigu ahaan jiray mid minus ah. Xiligaan oo Sweden uu baraf wada daboolay sanadkii hore ayaa sanadkaan inta badan uusan oolin dhulka.
Quburada la socota cimilada ayaa sheegay in ay filayaan in xaaladu ay sidaan sii ahaan doonto jiilaalyada soo socda maadaama heerkulka aduunka uu kor u kacay. Sanadkii 2010 ayaa qabowgii Sweden ka dhacay waxaa lagu tilmaamay kii ugu badnaa mudo dheer.
Dhinaca kale isbuucaan ayaa duufaan xoogan waxay ku dhufatay qeybo badan oo ka mid ah Sweden qaasatan galbeedka halkaasoo dad badan ay ku dhacday koronto la’aan.
waa run! sanadkii hore halkan aan kunoolahay ee galbeedka wadanka waxay gaartay -28 C markii julaftonka aheed laakin julaftonkii hada 5C ayaanu qabnay marka waad fahmi kartaa farqiga u dhaxeeya, tan korontadana waa ay inaga tagtay habeenkii isninta ilaa hada waa ay gogo,daa, duufaanta la yiraahdo (Dagmar) baa aad noogu dhufatay.
Walaahi waa wax lala yaabo Wadanka Sverige waxaan degenaa 12 sano waligeeyna meel ugama safrin laakiin November 10 keedii sanadkan aan k jirno ayaan aadey Africa waxaana maqlayaa wali Baraf ma de’in seecamal aniga Baraf ayaan ka qaxayee kkkk hada marka aan soo laabto ayu iska imaan doonaa waa amar Allah ee …..kkkkkkkk
December 29, 2011 at 01:19
Asc, walaalayaal isbeddelka cimiladu waxuu wataa dhibtiisa ee Allow wanaagiisa nasoo xiji. Haddii barafka dunidu uu dhalaalo oo kulku aduunka ku bato waxaa dhici doona daadad xoog badan, waxaana meesha ka bixi doona wadamo hadda dunida laga yaqaano sida Maldovia kuwaasoo uu daadku qaadi doono gebi ahaanba, waa sida ay noo shegen dadka aqoonta u leh cilmigan. Allaah ayaan shar oo dhan ka magangeleynaa meelaan joognaba.
Alxamdulilah dhaxanti baanu ka raysaney sanadkan, ilaahy ba mahad leh.
ilaah ayaa naxariista ugu mahad celi neyna aniga sanad kii hore xitaa waxaan ku fekerey in uu soomaalida habaar haayo waayoo dalkooda waa dagaal halkii ay yimadeen waaa qaboob kii naarta ahay ilaahay waa noo naxariistay alxamdulaahi masha,allah